Igbo, John: Lesson 020 - Ọrụ ebube mbụ nke Jizọs na agbamakwụkwọ dị na Kena (Jọn 2:1-12) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 020 (Jesus' first miracle)
4. Ọrụ ebube mbụ nke Jizọs na agbamakwụkwọ dị na Kena (Jọn 2:1-12)
1 N'ubọchi nke-atọ ọlulu-nwunye di na Kena nke Galili. Nne Jizos nọ n'ebe ahu. 2 Ewe kpọ kwa Jizos, Ya na ndi nēso uzọ-Ya, bia n'ọlulu-nwunye ahu. 3 Ma mb͕e manya-vine kọrọ, nne Jisus we si Ya, Ha enweghi manya-vine. 4 Jisus si ya, Nwanyi, gini ka Mu na gi nwekọrọ? Oge m erubeghị. "5 Nne ya wee sị ndị na-eje ozi," Ihe ọ bụla ọ gwara unu mee, meenụ ya. "6 Ma e nwere ite mmiri isii e tinyere nkume n'ebe ahụ dị ka ụzọ ndị Juu si dị ọcha, nke nwere mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ eme ihe. 7 Jizos si ha, Were miri b͕ajue ite-miri ahu. 8 Ha we b͕ajupu ha n'ọnu. O we si ha, Kuputanu ub͕u a, bugara onye-isi oriri ahu. Ha we were ya.9 Ma mb͕e onye-isi oriri ahu deturu miri ahu ọnu nke ghọrọri manya-vine, ma ọ mataghi ebe o si puta (ma ndi nēje ozi ndi kuputarari miri ahu mara), onye-isi oriri ahu kpọrọ onye nālu nwunye ọhu, 10 si ya, "Onye ọ bụla na-ebu ụzọ na-ebute mmanya dị mma, mgbe ndị ọbịa ahụ na-aṅụkwa mmanya na-abaghị uru, mgbe ahụ nke ahụ ka njọ. Gi onwe-gi edebewo manya-vine ọma rue ub͕u a.
Jizos ada na-eso ụzọ si na ndagwurugwu nke nchegharị gburugburu Baptizim na Jordan akpiri,rue ugwu nta nke Galili ka ha soro ná] l nke agbamakwụkwọ. Njem a nke 100 kilomita na-egosi anyị mgbanwe dị n'etiti abụọ ohuru. Ndị kwere ekwe agaghịzi anọ na ndò nke Iwu, kama ọ bụ ọṅụ nke ezi omume na Jizọs na-ebili anyanwụ na onye na-enye udo.Jisos abughi onye nadigh dika onye nadiri baptizim ma obu ihe kpatara ya na nrapu nke Kraist na ndi soro ya na obi uto nke ememe obula bu ihe ebube n'onwe ya. Ọ kwụsịghị mmanya, ebe ọ bụ na ọ kụziri na ọ bụghị ihe banyere nwoke nke merụrụ emerụ, ma echiche rụrụ arụ nke sitere n'obi mmadụ merụrụ ya. Jizọs ajụghị ihe ọ bụla ọ na-eme, kama ọ kụziiri ya na ọ bụchaghị ihe ndị a. Mkpụrụ obi anyị rụrụ arụ chọrọ ọdịdị ọhụrụ na ọmụmụ ọzọ. Ihe Nso na-egbochi bụ ịṅụbiga mmanya ókè na aṅụrụma.
Ndị na-eso ụzọ ya so Jizọs gaa oriri ahụ, Nataniel si na Kena (21:2). O yiri ka nne Jizọs maara ezinụlọ nke onye na-alụ nwanyị ọhụrụ. Echiche ahụ bụ na Josef anwụworị. Mary ama akabade edi ebeakpa, ndien Jesus ama ada itie akpan ke akpanikọ ke ubon.N'ihi ya, nne ya tụgharịrị n'ebe ọ nọ maka enyemaka iji zute mkpa nke ndị ikwu ha. Ebe ọ bụ na ọ laghachiri na Jọdan, ọ bụghịzi mmadụ nkịtị, mana mmụọ Nsọ na-agbanwe site na ibu ọrụ ụwa iji jeere Chineke ozi, ọrụ nke ndị na-eso ụzọ ya ga-eso.Mary adabere na Ọkpara ya, n'ihi na ọ maara nlekọta ya na ịhụnanya ya. Ịhụnanya ya dugara ọrụ ebube mbụ Jizọs aka. Okwukwe nime ịhụnanya Kraịst na-eme ka ogwe aka Chineke dị. Nne ahụ gwara ndị ohu ahụ ka ha mee ihe ọ bụla Jizọs kwuru. O doro anya na ọ ga-enyere aka n'otu ụzọ ma ọ bụ ndị ọzọ. Okwu ya nye ndị ohu, na-eje ozi dị ka ụkpụrụ iwu nye Churches niile, "Ihe ọ bụla Ọ gwara gị, mee ya!" Dị ka a pụrụ isi kwuo ya, nyefee naanị Kraịst; irube isi n'okwu Jizọs na-eweta ọtụtụ ọrụ ebube.
Akpu ocha, ihe efu ma saa mbara, nke nwere ike 600 lita juputara. Nke a na-egosi na ndị ọbịa ahụ jiri nnukwu mmiri dị ọcha. A chọrọ ịdị ọcha dị ọcha mgbe Jizọs nọ. Ọ dịghị mmadụ ọ bụla nwere ike ịbanye n'alụmdi na nwunye nke Nwa Atụrụ ahụ ruo mgbe emechara ya ọcha.Otú ọ dị, ịdị ọcha abụghị nchegbu ozugbo nke Kraịst. Ememe agbamakwụkwọ ahụ ga-aga n'ihu. Jizos ji obi nwayo gbanwee mmiri nke idi ocha ka o buru ezigbo mmanya. Otu esi eme nke a anyị amaghị. Mana anyi maara site na ihe omume a na ọbara ya a wusiri bu ndi zuru oke n'oriri Nwa Aturu ahu. Nke a enweghị ihe ịṅụbiga mmanya ókè. Mmụọ Nsọ ekweghị ka mmanya ọ bụla ṅụọ mmanya. Ma, nnukwu ihe oriri nke mmanya dị ụtọ na-egosi njedebe nke mgbaghara Kraịst maka mmehie nke ihe a kpọrọ mmadụ. Ka ha nile rie oke obi uto nke elu igwe. Mmadu niile nabata ekele na mmanya n'ememe Anyasị nke Onyenwe anyị, ihe nnọchianya nke ọnụnọ Kraịst - inye mgbaghara ka anyị na-ezu ike n'ọṅụ ya.
11 Jizos mere nmalite ihe-iriba-ama-Ya nile nka na Kena nke Galili, we me ka ebube-Ya puta ìhè; ndi nēso uzọ-Ya we kwere na Ya. Mb͕e ihe a gasiri Ọ ridara na Kapanaum, Ya onwe-ya, na nne-Ya, na umu-nne-Ya, na ndi nēso uzọ-Ya; ha we nọ n'ebe ahu ubọchi ole-na-ole.
O juru ndị na-eso ụzọ anya maka ikike okike Kraịst, ha nwekwara ikike ya maka ihe okike dị iche iche. Ha huru otuto ya ma kwere na Chineke ezitewo ya. Nke a mere ka a tụkwasị ya obi. Okwukwe nwere oge iji too, na nrubeisi maka nghọta. Ọ bụrụ na ị na-amụ ọrụ Jizọs, ma gbanwee nke ọma n'ime okwu ya, ị ga-aghọta ịdị ukwuu nke onye ya.Jisos wezugara onwe ya na ezin ul o ya ma nweere onwe ya site n'omume nile nke ijere Chineke ozi. Ma njikọ ya na nne ya na ụmụnne ya gara n'ihu. Ruo oge ụfọdụ, ha na ndị na-eso ụzọ ya na-aga. Ụmụnne ya so ya gaa Kapaniọm, bụ obodo ukwu nke dị n'akụkụ Lake Tiberias. Ndị na-eso ụzọ ya tụkwasịrị ya obi, ọ bụghị nanị n'ihi ihe ịrịba ama na Kena. Ha rapara n'aru ya maka ezi ihe
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, anyị na-ekele gị, n'ihi na ị kpọrọ anyị gaa agbamakwụkwọ, iji nọgide na ọṅụ nke mkpakọrịta gị. Gbaghara anyị mmehie anyị, mejupụta anyị na Mmụọ Nsọ gị. Anyị ga-eso gị, ma nọgide na ezi omume na ịdị ọcha, dịka i mere ma were onwe gị nye ọtụtụ.
Gịnị mere Jizọs ji kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya gaa agbamakwụkwọ ahụ?
NNYOCHA – 1
zitere anyị azịza ziri ezi maka 20 n'ime ajụjụ 24 a. Mgbe ahụ, anyị ga-ezitere gị usoro nke usoro ọmụmụ a.
Ònye dere ozi ọma nke anọ?
Gịnị bụ mmekọrịta dị n'etiti nke-anọ gospel na-atọ ndị mbụ?
Gini b ihe mgbaruozi nke ozioma nke Jọn?
Olee otú o si kwe omume ịkekọrịta ya, hazie ihe gbasara okwu ya
Gịnị bụ okwu nke a na-elegharị anya n'amaokwu nke mbụ nke Jọn 1 ma olee ihe ọ ga - eme?
Nso idi mme edu 6 emi Kraist ekenyenede ke akpa ozioma esie?
Gịnị bụ ihe dị iche n'etiti ìhè na ọchịchịrị ime mmụọ uche nke okwu?
Gịnị bụ nzube bụ isi na-eje ozi Jọn Baptizim?
Gini bu nmekorita nke Kraist na Ìhè na uwa ojoo?
Gini ka udi aru nke Kraist putara?
Gini ka nkpazu nke Kraist putara?
Olee echiche ohuru nke Kraist webata n'ime uwa?
Gịnị bụ ebumnobi nke ajụjụ ndị nnọchiteanya si n'ụlọikpe kasị elu nke ndị Juu jụrụ?
Olee otú Baptizim si akpọ ndị mmadụ ka ha kwadebe ụzọ Jehova?
Gịnị bụ ọnụ ọgụgụ kasị elu nke onye àmà Baptizim banyere Jizọs n'ihu ndị nnọchiteanya nke Sanhedrin?
Gini mere Jizos ji buru Mo Nso?
N'ihi gịnị ka ndị na-eso ụzọ abụọ ahụ ji soro Jizọs?
Olee otú ndị mbụ na-eso ụzọ Jizọs si kwusaa aha Jizọs?
Olee njikọ dị n'etiti utu aha - "Ọkpara Chineke" na "Nwa nke mmadụ"?
Zitere anyị aha gị na adreesị ederede ederede n'ụzọ doro anya na azịza gị wee degara adreesị na-esonụ:
Page last modified on March 05, 2020, at 05:43 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)